Khilaaf ayaa soo kala dhexgalay Salman Khan iyo Akshay Kumar – Sababta dhabta ahna waa la ogaaday! – Filimside.net
Khilaaf ayaa soo kala dhexgalay Salman Khan iyo Akshay Kumar – Sababta dhabta ahna waa la ogaaday!
December 3, 2017 Super Admin
Akshay Kumar iyo Salman Khan marka magacyadooda si wadajir ah loo soo hadal qaado taageere walba oo Bollywood ah waxaa maankiisa kusoo dhici jirtay inay saaxiibo wanaagsan yihiin.
Balse haatan warbaahinta India ayaa sheegeysa inuu meesha ka baxay xiriirkii saaxiibnimo ee ka dhexeeyey Akshay Kumar iyo Salman Khan.
Xitaa Salman waa uu iska indhotiray Akki mana salaamin inkastoo ay labadooduba joogeen xafladdii lnternational Film Festival of India (IFFI) ee ka dhacday Goa.
Tallaabadaan uu qaaday Dabangg Khan waxaa ka warhelay dadkii joogay xafladdaan, kuwaasoo isweydiiyey sababta uu Salman Khan isaga indhotiray salaanta Akshay Kumar iyo sababta aysan labadoodu u sheegeysan maadaama sidaas looga bartay marwalba oo ay xaflado nuucaan ah ku kulmaan.
Haddii la aaminayo warbixintaan ay qortay shabakadda Deccan Chronicle, khilaafka u dhexeeya labadaan jillaa ee caanka ka ah Bollywood Town wuxuu ka bilowday markii uu Akshay si qarsooni ah shaqo dheeraad ah ugu soo bandhigay gabadha lagu magacaabo Reshma Shetty oo ah maamulaha mashruucyada Salman Khan.
Warbaahinta India ayaana sheegeysa in Reshma ay sabab u tahay inuu xumaado xiriirkii saaxiibnimo ee ka dhexeeyey Akshay iyo Salman. Xaqiiqaduse waxay tahay Reshma ayaa diyaar u aheyd inay shaqeyso waqti ka badan midkeeda shaqada ee caadiga ah si ay mashruucyada ugu wanaagsan ugu soo saarto Akki.
Xitaa gabadhaan ayaa haatan ka hor isku dayday inay ka dhaadhiciso Salman Khan inuu xakameeyo waqtiga badan ee uu ku bixiyo showga uu daadihiyaha ka yahay ee Bigg Boss 11.
Khilaafka u dhexeeya Akshay Kumar iyo Salman Khan waa mid adduunka u muuqda – maxaa yeelay Salman Khan wuxuu isaga baxay mashruuca Kesari ee uu hogaamiyaha ka yahay Akshay Kumar, iyadoo filimkaas markii hore la sheegay inuu la maalgelin doono Karan Johar.
Filimka Kesari waxay isku dhacayaan filim isku sheeko ay yihiin oo uu hogaamiye ka yahay Ajay Devgn, waana la ogyahay saaxiibnimada iyo ixtiraamka ka dhexeeya Ajay iyo Salman, sidaas darteed warbaahintu waxay cuskatay sababtaas.
Laakiin waa inaan xasuusano inuu Salman yimid halkii lagu soo bandhigayey kaartada filimka Robot 2.0 markaasoo uu caddeeyey in sababta keentay goobtaas iyadoo aan laga warqabin ay aheyd Akshay dartiis, Sallu Bhai ayaana markaas saaxiibkiis goobta ku ammaanay.
Waxaa Aqrisay 1,822
hadhoow armaad tirahdaan Salman ba hadlo yidhi Akshay waa sxbkey